उनको लागी गजल नं. २
Posted on जनवरी 19, 2016 by Padam Prasad Paudel	• टिप्पणी छोड्नुहोस्
उनको लागी गजल नं. १ शुत्र :- २१२२ २१२२ २१२२ २१२२ लय/बहर :- मुफरद बहरे रमल देवता नै भाकि मैले पर्खिएथे तीमिलाई। फूल बास्ना त्यो पथैमा छर्किएथे तीमिलाई॥ आफनै सप्ना थियो मेरो नि सानू जिन्दगीमा, त्यागि सारा सोच सप्ना फर्किएथे तीमिलाई॥ केहि भाकै थेन ठूलै भूइचालो आउदा नी, एक त्यो हेराइले नै चर्किएथे तीमिलाई॥ भेट … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् →